Ogeysiiska Xuquuqda Daabacaha ee Millennium Digital ("DMCA")
Websaydhku waxaa loola jeedaa oo keliya ujeeddo macluumaad ah sinnaba looma fasiri karo talobixin kama dambays ah, jawaab celin, ra'yi, ama soo jeedin ah.
Haddii aad dareento in xuquuqda lahaanshaha aqooneed lagu xad gudbay ama haddii ogaysiis xadgudub ah lagaa soo gudbiyay, waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh noola soo xiriirto adoo noo soo diraya emayl ah meesha ka saarista xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee lagu xadgudbay ama haddii ogeysiis xadgudub la soo gudbiyay kaa gees ah.
Fadlan la soco in qaar ka mid ah adeegyada ama ilaha macluumaadka ay bixiyaan dhinacyo saddexaad mana ahan wax macquul ah inaan hubino xaqiiqada dhammaan. Qeyb ka mid ah websaydhkan lama gudbin karo ama dib looma soo saari karo nooc kasta ha ahaadee, wax kastoo [gebi ahaan ama qayb ahaan ah], farsamo ahaan, elektaroonig ah, ama si kale, oo ay ku jiraan nuqul ka sameynta iyo duubista, ama wixii macluumaad kaydinta iyo dib u soo celinta macluumaadka ah, ama lagu kala qaado emaylka, ama loo isticmaalo qaab kasta oo kale oo aan halkan looga wada hadlin haddii aan la helin oggolaansho qoraal ah oo hore ee milkiilaha websaydhka ah.
Markaan helno ogeysiiska DMCA, waxaan isku dayi doonnaa inaan u baarno si buuxda awoodeena. Guud ahaan, waqtiga hogaaminta ee 72 saacadood oo shaqo ama in ka badan xaaladaha qaarkood waa in nala siiyaa in kastoo laga yaabo inay taasi dhaafto 15 maalmood ama ka badan xaaladaha qaarkood. Fadlan la soco in qoraalka, sawirada, HTML, sawirada, iyo qoraallada ay si buuxda u leeyihiin xuquuqdooda oo ay leedahay degelkan, dhammaan xuquuqdina waa xifdisan tahay.